တစ်ဆင့်ချင်းသင်ခန်းစာများ | သတင်းနှင့်နည်းပညာ၊ သတင်းများ (စာမျက်နှာ ၂)
ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု application များကိုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက် ပို၍ ဆက်လက်၍ အသုံးပြုသည်။ စတင်ခဲ့သည်ကတည်းကချုံ့သည်
၎င်းသည်မထင်ရသော်လည်း Microsoft Edge သည် PDF ဖိုင်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအယ်ဒီတာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်အများစုကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
အဖွဲ့ ၀ င် ၈ ယောက်အထိဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကို WhatsApp သို့ ဆက်သွယ်၍ မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်
သင်၏ Android (သို့) iOS စက်မှအင်တာနက်ကိုဝေမျှရန်သင့်မှာရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးရှိသည်
ယခု Netflix ကပရိုဖိုင်းတစ်ခုစီကို pin နှင့်ကာကွယ်ရန်၊ ကလေးများသို့မဟုတ်အခြားအသုံးပြုသူများကို၎င်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ports အားလုံးကိုဖွင့်ရန်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားစဉ်သင်၏ဆက်သွယ်မှုအရည်အသွေးကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေရန် DMZ Host ကိုသင်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြထားသည်။
ဒီနေ့မင်းတို့ရဲ့ Instagram ပုံပြင်တွေကိုဘယ်လိုပိုသက်ဝင်စေမလဲ၊ စာပေတွေနဲ့အခြားပုံပြင်တွေကိုဘယ်လိုဝေမျှမလဲဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်
ယနေ့တွင် WhatsApp သည်အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းကိုအသုံးပြုမှုနှင့်၎င်းတွင်ရှိသောလူကြိုက်များမှုများကိုလည်းရှင်းပြရန်မလိုအပ်ပါ။
Android 11 Developer Beta တွင်အသစ်အဆန်းများနှင့်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
ဤတွင် Android 11 Developer Preview ယူဆောင်လာသည့်အရေးကြီးသတင်းများနှင့်၎င်းကိုမည်သို့လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
တိကျတဲ့စကားလုံးများ (သို့) Twitter hashtags ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပိတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပြပါမယ်။ မည်သည့်ကိရိယာမှ
မည်သည့်အလုပ်အကိုင်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့အားဖိုင်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ စာရွက်စာတမ်းများကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ရန်အလွန်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းအစား ...
သင်၏အိမ်ရှိ Alexa နှင့် Google Home ဖြင့်မည်သည့်ကိရိယာကိုမဆိုမည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်နည်း
ရုပ်မြင်သံကြားကနေလေအေးပေးစက်သို့ Alexa နှင့် Google Home မှတဆင့်မည်သည့်ကိရိယာကိုမဆိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပုံကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြချင်ပါသည်။
Android ဖုန်းတွေမှာရရှိနိုင်တဲ့ကိရိယာတခုခုသုံးပြီး WiFi ခိုးယူခံရရင်ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲ
ဘာကြောင့် Instagram ကိုမှမပိတ်ဘဲနေရတာလဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် Instagram, Facebook, Twitter စသည်တို့အကြားတွင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအကောင့်များရှိသည်ဟူသောအခြေခံမှစတင်သည်။ အားဖြင့်…
Windows 10 နဲ့ Mac ပေါ်မှာ screen ကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကို Windows ဖြစ်စေ၊ macOS ဖြစ်စေခြင်းဆိုသည်မှာတတိယပါတီ application များတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်သည့်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
TV ပေါ်က iPhone မျက်နှာပြင်ကို ChromeCast ဖြင့်ကြည့်ရှုနည်း
Google ChromeCast မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်တွင်အကြောင်းအရာများကိုမည်သို့ကြည့်ရှုရမည်ကိုဤတွင်တွေ့ရှိရသည်
ပြီးပြည့်စုံသော operating system မရှိပါ။ သူတို့တစ်ခုချင်းစီဟာ macOS, iOS, Android, distro တစ်ခုဖြစ်ပါစေ။
Instagram အပေါ် Boomerangs အသစ်သက်ရောက်မှုများကိုမည်သို့မည်ပုံသုံးရမည်နည်း
Instagram (Facebook Inc. မှပိုင်ဆိုင်သည်) သည်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်အသစ်များကြောင့်ဆက်လက်တိုးတက်နေသည်။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်အတွင်းသူ့ဟာသူနေရာချခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Windows 10 တွင်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုတပ်ဆင်လိုပါကပထမ ဦး ဆုံးမဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်မှာ Windows Defender ကိုပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများမလိုအပ်ဘဲသင်၏ Android စက်တွင်နေရာလွတ်ကိုရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောနည်းဖြင့်မည်သို့သိမ်းဆည်းနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်
iPhone နှင့် Android ကြားရှိဖိုင်များကို SnapDrop ဖြင့်လွှဲပြောင်းခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များကို Android သို့မဟုတ် iPhone သို့တိုတောင်းသောအကွာအဝေးတွင်အိမ်သို့ရောက်တာသို့ကျွန်ုပ်တို့၏ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကို သုံး၍ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလွှဲပြောင်းနိုင်သည်
ဖျက်ထားတဲ့ Word ဖိုင်ကိုဘယ်လိုဆယ်တင်ရမလဲ
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Excel ဖိုင်တစ်ခုဆုံးရှုံးခြင်း၏ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြစ်ခဲ့လျှင်ဤဆောင်းပါးတွင်၎င်းကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်ရန်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာအားလုံးကိုသင်ပြပါမည်။
ကျွန်ုပ်၏အများပြည်သူဆိုင်ရာ IP ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲ
ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိအင်တာနက်ကိုဆက်သွယ်သောအခါ Public IP ကိုပြောင်းလဲလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သောအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။
Spotify မှဂီတကိုဘယ်လို download လုပ်မလည်း
သီချင်းများသို့မဟုတ် podcasts များကို Spotify မှသီချင်းများနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့လွယ်ကူသောအဆင့်အနည်းငယ်ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည့်အဆင့်များကိုရှာဖွေပါ။
ဒီတိုးချဲ့မှုကိုသင်စိတ်မဝင်စားသော YouTube ဗွီဒီယိုများနှင့်ချန်နယ်များကိုဖျက်ပါ
သင်၏ browser တွင်တိုးချဲ့ခြင်းအားဖြင့်သင်ကြည့်ရှုရန်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိသော YouTube မှဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ချန်နယ်များကိုမည်သို့ဖျက်ရမည်ကိုရှာဖွေပါ။
သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကို Facebook မှဖယ်ရှားခြင်း
၂၀၁၁ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲများကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်မကြာမီကျင်းပတော့မည်ဖြစ်ရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည် ...
ဗွီဒီယိုများမှ YouTube မှပုံများထုတ်ယူနည်း
သင်၏ YouTube ဗွီဒီယိုများမှပုံရိပ်များကိုထုတ်ယူနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးကိရိယာများနှင့်ထိုဗီဒီယိုများမှအချိန်များကိုရယူပါ
5G NSA နှင့် 5G SA တို့၏ကွာခြားချက်များ
5G NSA နှင့် 5G SA တို့၏ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်စျေးကွက်ထဲတွင် 5G ထွက်ပေါ်လာခြင်း၏အရေးပါမှုကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
လူတစ် ဦး ၏ Instagram အကောင့်ကိုရှာဖွေသောအခါ Instagram ပေါ်တွင်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်နှင့်သင်မှတ်သားရမည့်အရာများကိုရှာဖွေပါ
သင်၏ကွန်ပျူတာ (သို့) စမတ်ဖုန်းတွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအသုံးချနည်းကိုလေ့လာရန် Skype တွင်မည်သည့်အရေးအပါဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှာဖွေမည်ကိုရှာဖွေပါ။
gmail အကောင့်တစ်ခုဘယ်လိုမျှဝေရမယ်၊ ဘယ်လိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရမယ်၊ သင့်ရဲ့စာကိုအခြားသူများအားဘယ်လိုသုံးရမလဲရှာဖွေပါ။
WhatsApp တွင် Telegram စတစ်ကာများအသုံးပြုနည်း
WhatsApp အတွက်စတစ်ကာများထပ်မံကူးယူလိုပါသလား။ Telegram စတစ်ကာများကို WhatsApp တွင်မည်သို့အခမဲ့ထည့်ရမည်နည်း
Google Maps မှာသြဒီနိတ်တွေကိုဘယ်လိုထားမလဲ
သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းတွင် Skype အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်နည်းလမ်းများနှင့်သင်၏အကောင့်အချက်အလက်များကိုမည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုရှာဖွေပါ။
သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းမှ Instagram တွင်သင်မည်သို့မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။ နည်းလမ်းအားလုံးရှင်းပြသည်။
သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင် Spotify မှအများဆုံးအကျိုးရယူရန်နည်းလမ်းများ
သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိ Spotify အပလီကေးရှင်းမှအကျိုးအပြည့်အဝရရှိရန်အတွက်ဤလှည့်ကွက်များကိုရှာဖွေပါ။ Android အတွက် Spotify လှည့်ကွက်။
၀ င်းဒိုးစ်မီနူးတွင်လမ်းညွှန်တစ်ခု၊ သင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်သိပါသလား။
Game of Thrones ပြီးဆုံးသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက် HBO ၌သင်၏ subscription ကိုပယ်ဖျက်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီဟုထင်လျှင်၊
PDF document တစ်ခုကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲ
သင်၏ကွန်ပျူတာမှဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ ပရိုဂရမ်များနှင့်အခြားအရာများကိုသင်၏ကွန်ပျူတာမှတည်းဖြတ်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။ ဤနေရာတွင် PDF စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုပြုပြင်မွမ်းမံရန်မည်သို့လေ့လာပါ။
PDF သို့စာရေးခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ PDF စာရွက်စာတမ်းများကိုတည်းဖြတ်။ ၎င်းတို့ထဲ၌ရေးရန်မိုဘိုင်းနှင့်ကွန်ပျူတာအတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများကိုရှာဖွေပါ။
တက္ကစီနှင့်အပေါဆုံးစျေးနှုန်းချိုသာသော Uber ကိုအသုံးပြုရန်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနှင့်ရှင်းပြသည်။ သင့်ပထမခရီးအတွက်ယူရို ၅ ကိုယူပါ။
ကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့တွင် Bluetooth ရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း
သင့်လက်ပ်တော့ပ်မှာ ၀ င်းဒိုးလက်ပ်တော့နှင့် Mac တို့မှာ Bluetooth ရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်သည့်နည်းလမ်းအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့် Android နှင့် iOS အတွက်မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်အက်ပလီကေးရှင်းမှဗွီဒီယိုများကိုသင် Facebook သို့မည်သို့တင်ပို့နိုင်သည်ကိုရှာဖွေပါ။
တစ်ယောက်ယောက်ကိုဘယ်လိုပိတ်ဆို့မလဲဆိုတာကိုသံသယဝင်လျှင် WhatsApp တွင်အဆက်အသွယ်တစ်ခုအားသင်ပိတ်ဆို့ထားလျှင်မည်သည့်အကျိုးဆက်များရှိကြောင်းရှာဖွေပါ။
သင်သည်ပုဂ္ဂလိကအဖြစ်အပျက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အများဆိုင်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖန်တီးရန်ရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ Facebook တွင်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုသင်မည်သို့ဖန်တီးနိုင်သည်ကိုရှာဖွေပါ။ ခြေလှမ်းအားဖြင့်ရှင်းပြသည်။
Instagram ပေါ်ရှိနောက်လိုက်များအားဖယ်ရှားခြင်း၏အင်္ဂါရပ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။ နောက်လိုက်များကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နှင့်ကျွန်ုပ်အကောင့်တွင်ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များကားအဘယ်နည်း။
သင်၏ desktop နှင့်သင့် Android app ရှိဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိမက်ဆေ့ခ်ျများအားလုံးကိုပယ်ဖျက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
PC, Windows, Mac, iOS သို့မဟုတ် Android အတွက် CBR ဖိုင်များကိုဖွင့်ရန်အကောင်းဆုံး application များကိုရှာဖွေပါ။ ဒီဖိုင်တွေဘယ်လိုဖွင့်ပြီလဲ
CC နဲ့ CCO ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ
၎င်းတို့ဘာတွေလဲ၊ သူတို့ဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ၊ ဂျီမေးလ်ဒါမှမဟုတ်တခြားအီးမေးလ်ပလက်ဖောင်းထဲကအီးမေးလ်အကောင့်တခုရဲ့ CC နဲ့ Bcc တို့ရဲ့ကွာခြားချက်တွေကိုရှာဖွေပါ။
အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိပဲ YouTube ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်သင်လိုအပ်သမျှကိုပြသပါသည်။ YouTube မှာဒေတာမရှိဘဲနဲ့ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲဗွီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုကြည့်နိုင်မလဲ။
အင်တာနက်မှတဆင့် WEB ၀ င်ငွေခွန်ပြန်ပို့ပုံ
အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်သင်ရှောင် ထွက်၍ မရနိုင်သောကြောက်မက်ဖွယ်အခိုက်အတန့်ရောက်ရှိနေပြီ။
၂၀၀၄ Aprilပြီ ၁ ရက်တွင်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီးသည်၎င်း၏အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။
Facebook ငြီးငွေ့သလား? သင်၏ Facebook အကောင့်အားခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်း (သို့) ၎င်းကိုအမြဲတမ်းဖျက်ပစ်ရန်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များကိုရှာဖွေပါ။
Android တက်ဘလက်ကိုဘယ်လိုပုံစံချမလဲဆိုတာရှာဖွေပါ။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အမှားအယွင်းမရှိဘဲစက်ရုံမှာချထားပါ။ သင်တက်ဘလက်ကိုဘယ်လိုပုံစံချမလဲသိလား။
PDF ကိုအပိုင်းများစွာ ခွဲ၍ သို့မဟုတ်စာမျက်နှာများကိုဤရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာနှင့်ခွဲထုတ်ရန်မည်သည့်ပရိုဂရမ်ကိုမျှတပ်ဆင်ရန်မလိုပါ။
ရှင်းပြထားသည့်အဆင့်များနှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာပရိုဖိုင်းတွင်ဓာတ်ပုံများကိုသင်၏ Instagram ပရိုဖိုင်းသို့တင်ရန်အတွက်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များကိုရှာဖွေပါ။
iCloud ကိုမည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှမဆိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းသုံးနည်းကိုသင်ပေးပါတယ်။ iCloud ရဲ့အားသာချက်များကိုသင်သိပါသလား။ ဒီမှာသူတို့ကိုရှာဖွေပါ။
သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှဓါတ်ပုံများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
သင်၏ Instagram အကောင့်ကိုအတည်ပြုပြီးအပြာအထိမ်းအမှတ်ကိုသင်ထည့်သွင်းလိုပါသလား။ သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဘယ်လိုအတည်ပြုရမယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဒီရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ။
သင့်ကို Facebook မှာတစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်အားပိတ်ဆို့ထားခြင်းလား၊ သူတို့၏လူမှုရေးကွန်ယက်တွင်သူတို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုသင်မမြင်နိုင်ခြင်းရှိမရှိရှာရန်ရနိုင်သောနည်းလမ်းများအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
Vodafone TV သည် Samsung ၏တီဗီတွင်တပ်ဆင်ပုံကိုလာသည်
Vodafone တီဗီသည် Samsung Smart TVs အတွက် operating system ဖြစ်သော Tizen OS application catalog တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြပါလိမ့်မည်။
သင် PDF စာရွက်စာတမ်းတခုကိုဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီသင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အဆင့်တွေကိုလိုက်နာရုံပါပဲ။
သင်၏ရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာဖြင့်သင်၏ WiFi ကွန်ယက်လုံခြုံမှုကိုမြှင့်တင်ပါ၊ ၎င်း၏အမည်နှင့်စကားဝှက်များကိုမည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုလေ့လာပါ။
သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် Android ရှိဖျက်ထားသောဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာတိုများကိုလွယ်ကူစွာပြန်လည်ရယူရန်ရရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။
Word ကို PDF အဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
စာရွက်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းကို PDF ဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းရန်နှင့်အွန်လိုင်းနှင့် Microsoft Word ကဲ့သို့အစီအစဉ်များကိုရှာဖွေပါ။
ပုံတစ်ပုံကိုပုံတစ်ပုံအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်းဒိုးမိတ္တူကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။
PDF ကို Word အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ ဂူဂဲလ်မှတ်တမ်းများသို့မဟုတ် Adobe Acrobat မှနည်းလမ်းများအားလုံးသည်တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြခဲ့သည်။
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများမှ Adobe Acrobat Pro သို့ Mac ပေါ်တွင်ကြိုတင်ကြည့်ရှုရန် compress ရန်နည်းလမ်းအားလုံးရှာဖွေပါ။
ဗွီဒီယိုကို GIF သို့ပြောင်းလဲနည်း
မည်သည့်ဗွီဒီယိုကိုမဆိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားသည့် GIF သို့ပြောင်းလဲရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပြီးသင်၏လူမှုကွန်ယက်များတွင်မျှဝေနိုင်သည်
တွစ်တာအသုံးပြုနည်းကိုလေ့လာပါ။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ။ hashtags နှင့်ဖော်ပြချက်များကိုသုံးပါ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုသူတို့မသိဘဲနှင့်သင်၏သူငယ်ချင်းမဟုတ်သောအသုံးပြုသူကိုပိတ်ဆို့ရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။ ဖျက်ပစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်မည်သို့ခြားနားသနည်း။
အကယ်၍ သင်၏ iCloud အကောင့်၌နေရာလွတ်များပိုမိုရယူရန်မလိုဘဲနေရာလွတ်ရယူလိုပါက၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်အတွက်အကြံပြုချက်များမှာဤတွင်ပါ။
rar ဖိုင်များကို unzip လုပ်နည်း
သင်၏ PC, Mac, iPhone သို့မဟုတ် Android တွင်သင်၏ဖိုင်များကို RAR format ဖြင့်ဖွင့်ရန်လျှောက်လွှာတစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေနေပါကမည်သည့်အကောင်းဆုံးကိုသင်ပြမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြပါလိမ့်မည်။
ဗွီဒီယိုတစ်ခုကို VLC ဖြင့်မည်သို့လည်ပတ်ရမည်နည်း
VLC သည်မည်သည့် platform အတွက်မဆိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးကစားသမားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏စမတ်ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ (သို့) တက်ဘလက်ကိုအရန်ကူးယူရန်မည်သို့လုပ်ရမည်ကိုသင်သိလိုပါကဤဆောင်းပါးတွင်သင့်အားရရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်။
စျေးကွက်တွင်သင်တွေ့ရှိနိုင်သောနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အထိရောက်ဆုံး data recovery software Wondershare Recoverit ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်
၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့် Wallapop တွင်ကြော်ငြာကိုမည်သို့တင်မည်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပါသည်။ Wallapop မှာဘယ်လိုရောင်းရမှန်းသင်သိပါသလား။ ဤအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါ
Instagram ကို Tag လုပ်နည်း
ဓာတ်ပုံကို Instagram မှာတင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေပါ၊ ဓာတ်ပုံမတင်ခင်နှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးပါကဖြစ်နိုင်ပါတယ်
LinkedIn - ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်လူမှုကွန်ယက်အကြောင်းအားလုံးရှာဖွေပါ။ ဒီကွန်ရက်ဆိုတာဘာလဲနှင့်အလုပ်ရှာဖွေရန်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပိုမိုလေ့လာပါ
ဤရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာဖြင့်သင်၏ WiFi ကွန်ယက်၏မြန်နှုန်းနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
iCloud တွင်နေရာလွတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် iPhone နှင့် Mac တို့မှလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာမည်သို့လွှတ်တင်မည်နည်း
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဘလော့ဂ်၊ ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးသည်။ ၎င်းကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်၊ စာရင်းဇယားများကိုကြည့်ရှု။ စိတ်ကြိုက်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုရှာဖွေပါ
ဤရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာဖြင့် Vimeo မှဗွီဒီယိုလေးမျိုးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone သည်အခမဲ့လားမည်သို့သိရမည်နည်း
ဤစမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုကိုမ ၀ ယ်မီကျွန်ုပ်၏ iPhone အခမဲ့ရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း
Flickr ၏ကြီးမားသောပလက်ဖောင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်၊ ဤသင်ခန်းစာနှင့်အတူရုပ်ပုံများကိုအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာမည်သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
WhatsApp messaging application မှတဆင့်တည်နေရာကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များသို့မည်သို့ပို့နိုင်မည်နည်း
သင့် Mac တွင်ရာနှင့်ချီသောစိတ်ကြိုက်စာလုံးများမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုမသိရှိသေးပါသလော။ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြောပြတဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့
သင်၏ Instagram အကောင့်ကိုထိထိရောက်ရောက်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်၎င်းကိုခေတ္တပိတ်ထားနိုင်သည့်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှင်းပြခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်းစကားဝိုင်းများကိုမဆုံးရှုံးလိုပါက WhatsApp ကသူတို့ကိုမဖျက်ခင် backup လုပ်ထားရမည်။
ဤနည်းလမ်းများနှင့်ကိရိယာများဖြင့် Facebook ဗွီဒီယိုများကို Windows၊ Android, Mac နှင့် iOS တို့တွင်အလွယ်တကူဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။
သင်၏ရုပ်ပုံများကို Polaroid နှင့်ရိုက်ထားသည့်ပုံစံသို့ပြောင်းလဲလိုပါသလား။ သင်၏ဓာတ်ပုံများကိုအခြားခေတ်မှကြည့်ရှုရန်ဤရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာကိုလက်မလွတ်ပါနှင့်
iOS နှင့် macOS ကိရိယာများတွင် AirDrop ကိုအသုံးပြုနည်း
စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဖိုင်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ Safari လင့်များစသည်တို့ကိုဝေမျှရန် iOS နှင့် macOS ကိရိယာများမှာ AirDrop ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုပြပေးပါမယ်။
သင်၏ Android ဖုန်း၊ iPhone သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာသို့ Instagram ဗွီဒီယိုများကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။
iPad ကိုဘယ်လိုရောင်းချင်လဲ (သို့) အဲဒါကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်မြန်စတင်နိုင်အောင် scratch ကနေစဖို့ဘယ်လိုပုံစံရေးဆွဲမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးပါတယ်။
Twitter ဗွီဒီယိုများကိုသင်၏စက်သို့မည်သို့ကူးယူရမည်ကိုလေ့လာပါ၊ ၎င်းသည် Windows၊ Android သို့မဟုတ် iOS ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါစေ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာတစ်ဆင့်ချင်းစီရှင်းပြပါမယ်။
သင်၏ Twitter အကောင့်တွင်နောက်လိုက်များပိုမိုရရှိရန်။ လူကြိုက်များသောလူမှုကွန်ယက်တွင်နောက်လိုက်များမည်သို့ရနိုင်သည်ကိုရှာဖွေပါ။
ဒီလှည့်ကွက်တွေနဲ့ Instagram ကိုနောက်လိုက်တွေဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ လူမှုကွန်ယက်တွင်နောက်လိုက်များရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။
Mac တွင် Pendrive တစ်ခုမည်သို့ပုံစံချရမည်နည်း
သင့် iPhone ပေါ်တွင်နေရာလွတ်ပေးရန်နည်းလမ်း (၆) ခု
ကျွန်ုပ်၏ iPhone တွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနေရာကိုမည်သို့လွတ်မြောက်နိုင်မည်နည်း။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာကိုလိုက်နာပြီးသင့် iPhone ကိုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာနေရာချဖို့နည်းလမ်းခြောက်ခုကိုသိထားပါ။
PDF မှ JPG သို့သွားနည်း
PDF မှ JPG သို့ကူးပြောင်းခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြပေးပါမယ်။
USB မှ Windows 10 ကို Install လုပ်နည်း
USB မှ Windows 10 ကို install လုပ်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Internet Explorer ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲ
ပရိုဂရမ်များမရှိဘဲ YouTube ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
YouTube မှမည်သည့်ဗွီဒီယိုကိုမဆိုကူးယူရန်တတိယပါတီ application ကိုသုံးရန်မလိုအပ်ပါ
သင့်ရဲ့ iPhone ကိုဘယ်လိုပြန်ယူမလဲဆိုတာနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာပြီးဒီရိုးရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့အကွက်ထဲကိုလုပ်လိုက်ပါ။
Apple ID ကိုဘယ်လိုပြန်ရနိုင်မလဲ
Screenshots တွေရိုက်တဲ့အခါ MacOS ကမ်းလှမ်းတဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေအားလုံးကိုသင်မသိသေးဘူးဆိုရင်ဒီဆောင်းပါးကနေသင်သံသယတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်၌ယာဉ်လက်မှတ်ရှိလျှင်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။ မေးခွန်းများ၊ အဖြေများနှင့်လှည့်ကွက်များ
Mac ကိုဘယ်လို format လုပ်မလဲ
ဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်လိုပိတ်ဆို့မလဲ။ သင်၏ Android သို့မဟုတ် iPhone တွင်ဖုန်းနံပါတ်များကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပိတ်ဆို့ရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။
ဓာတ်ပုံများကိုသင်၏ iPhone မှသင့်ကွန်ပျူတာသို့မည်သို့ကူးယူရမည်ကိုလေ့လာပြီး၎င်းတို့ကိုလုံခြုံအောင် ထား၍ အလွယ်ဆုံးနည်းများဖြင့်စုစည်းနိုင်သည်။
Google Drive ဆိုတာဘာလဲ
Google Drive ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသင်မသိသေးရင်ဒီဆောင်းပါးမှာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ၊ သင်လုပ်နိုင်တာအားလုံးကိုပြသပါမယ်။
တစ်စုံတစ် ဦး သည်အိမ်တွင်သို့မဟုတ်အလုပ်တွင် WiFi အသုံးပြုနေခြင်းရှိမရှိသိရှိရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေပါ။ သင့်ရဲ့ WiFi အခိုးခံရရင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
YouTube မှဗွီဒီယိုများနှင့်တေးဂီတများကို MP4 သို့မဟုတ် MP3 ပုံစံဖြင့်ကူးယူလိုပါကဤသင်ခန်းစာကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Instagram အကောင့်ကိုဘယ်လိုအတည်ပြုရမလဲ
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်အတွင်းမှားယွင်းသောသတိပေးချက်များသည်လူမှုကွန်ယက်များ၏အကြီးမားဆုံးသောဆိုးကျိုးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ထိုအခါငါလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်အတွင်းငါနောက်ဆုံးသင်၏ Instagram အကောင့်အတည်ပြုရန်အားပေးခဲ့ကြပါလျှင်, ဤဆောင်းပါး၌ငါတို့သည်သင်လျင်မြန်စွာလုပ်နိုင်မည်ဖို့လိုက်နာရန်ခြေလှမ်းများအားလုံးပြသပါ။
အခန်းကြီးများအကြား Netflix ကကြော်ငြာများကို disable လုပ်နည်း
အနည်းဆုံးတော့ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Netflix အားအခန်းကြီးများအကြားရှိ၎င်း၏ကြော်ငြာများကိုပြခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည်။ သင်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
Outlook Inbox folder ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
ဒေတာသိုလှောင်ရာရှိ PST ဖိုင်များနှင့်ဆက်စပ်သောအမှားတစ်ခုနှင့်ဖွင့်ပါကသင်၏ Outlook Inbox အားမည်သို့ပြန်လည်ပြုပြင်ရမည်ကိုရှာဖွေပါ။
ဒီ extension နှင့်အတူမည်သည့်ဗီဒီယိုကိုမဆို download လုပ်ပါ
Google Chrome အတွက်ဒီတိုးချဲ့မှုကြောင့်မည်သည့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာမှမဆိုသင့်ကွန်ပြူတာသို့ဗွီဒီယိုများကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
Citypaq မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုသင်အပြည့်အဝနားလည်စေရန်သင်ခန်းစာသေးသေးလေးတစ်ခုသင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပို့ပေးသည်။
အခင်းအကျင်းများကို Google Chrome တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ browsers များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်အတွက် Google Chrome သည်လက်တွေ့အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည့်တစ်ခုတည်းသောဘရောက်ဇာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးဂူဂဲလ် Chrome တွင် themes များထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စီမံခြင်းထက်အခြားအရောင်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ browser ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
Telegram ကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏ Kindle သို့သင်၏ eBooks ဘယ်လိုပို့မလဲ
သင်၏အကြိုက်ဆုံး eBooks များကို Telegram မှတစ်ဆင့် Kindle စာဖတ်သူထံပေးပို့ရန်ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်သည့်နည်းလမ်းသစ်ကိုလေ့လာပါ
သင်၏ Spotify အကောင့်တွင်သင်အများဆုံးနားထောင်ပြီးသောသီချင်းများနှင့်အနုပညာရှင်များဖြင့်ဖွင့်စရာစာရင်းများကိုဖန်တီးပါ။
Actualidad Gadget မှာဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုလုံခြုံမှုရှိမရှိသိဖို့လိုအပ်တဲ့လှည့်ကွက်များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။
Fortnite ကို Google Play စတိုးတွင်မရရှိနိုင်ပါ။ သင်အလွယ်တကူကစားနိုင်အောင် Android တွင် Fortnite ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
ဤရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာအတိုင်းလိုက်နာခြင်းဖြင့်အင်တာနက်မှတေးဂီတကို Mp3 format ဖြင့်အလွယ်တကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူးယူပါ။
သင်၏ Facebook လမ်းကြောင်းမှသင်၏ post လမ်းကြောင်းအားလုံးကိုဖျက်လိုပါကမည်သို့လေ့လာရမည်ကိုဤသင်ခန်းစာအတိုင်းလိုက်နာပါ။
PLC လား၊ ကွဲပြားမှုများနှင့်မည်သည့်အရာသည်သင့်အမှုနှင့်အညီသင့်တော်သည်
PLC နှင့် WiFi repeater အကြားမည်သည့်ခြားနားချက်များရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသွားပါမည်၊ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အချိန်၌မည်သည်ကိုအသုံးပြုသင့်သည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချန်ပီယံလိဂ် online ကိုဘယ်လိုလိုက်လျှောက်ရမလဲ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ၂၀၁၈ ဘောလုံး၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်၏ကွန်ပျူတာ (သို့) လက်ကိုင်ဖုန်းများမှမလွတ်ပါစေနှင့်။
သူတို့ကငါ့ကိုအွန်လိုင်းမြင်ကြဘူးဒါ Instagram ကိုအပေါ် connection ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Actualidad Gadget မှာသင်ခန်းစာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာတယ်၊ Instagram ကိုသူတို့မမြင်ရအောင် connection ကိုဝှက်ထားဖို့သင်ပေးတယ်။
သင်၏ကွန်ပျူတာကိုနေ့ရောညပါဖြစ်စေ၊ ညအချိန်တွင်ဖြစ်စေပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်အခြေအနေများနှင့်အတူ မူတည်၍ Microsoft ၏မေးလ်ဝန်ဆောင်မှု Outlook သည်သုံးစွဲသူများတန်ဖိုးထားသည့်မှောင်မိုက်သောအသွင်အပြင်သစ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
မိတ်ဆွေလေးယောက်နှင့်သင်၏အကောင့်ကိုမျှဝေခြင်းဖြင့် Netflix တွင်မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း
မိတ်ဆွေလေးယောက်အထိ Netflix ကိုမျှဝေခြင်းဖြင့်သင်အများဆုံးသိမ်းဆည်းနိုင်ပြီးကန့်သတ်ချက်မရှိပဲပါဝင်နိုင်သည်။
Microsoft Excel တွင်ကော်လံများဖြင့်အတန်းများအားမည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကိန်းဂဏန်းများ၊ စာရင်းစစ်များ၊ မတူညီသောစာရွက်များအကြားရှာဖွေမှုများ၊ ရှာဖွေခြင်း၊ သင်ဇယားကွက်တစ်ခုအတွင်းရှိကော်လံများအတွက်အတန်းများကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုသင်အမြဲတမ်းတွေးတောခဲ့ပါကအဖြေမှာဟုတ်ကဲ့ဖြစ်သည်။ လုပ်ပါ
Google Chrome ရှိ downloads ဖိုင်တွဲ၏တည်နေရာကိုမည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဂူဂဲလ်ခရုမ်းသည်အန်းဒရွိုက်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအများဆုံးဘရောက်ဇာဖြစ်လာသည် (၎င်းကိုထည့်သွင်းထားသည်) Google Chrome ၏ကူးယူထားသည့်ဖိုင်တွဲ၏တည်နေရာကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောအလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်ပါး။
နောက်ဆုံးတော့! ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Opera တွင် Chrome extensions များကို install လုပ်နိုင်ပြီ
သင်၏ဘရောက်ဇာကိုပိုမိုပြည့်စုံစေရန်နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်သင်၏အကြိုက်ဆုံး Google Chrome extension များကို Opera Browser တွင်ထည့်ပါ။
သင်၏အင်တာနက်အရည်အသွေးကို FAST၊ အကောင်းဆုံးအမြန်နှုန်းတိုင်းတာခြင်းဖြင့်တိုင်းတာရန်
ADSL ရောက်ရှိလာချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်များရှိအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအရည်အသွေးသည်အလွန်မြန်ဆန်ပြီးအရည်အသွေးနှင့်မြန်နှုန်း၊ အမြန်နှုန်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ပြီးပြည့်စုံသော FAST အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုနှင့်သင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအရှိန်ကိုတိုင်းတာရန်နှစ်ခုစလုံးသည်အလွန်အရေးကြီးသောခုန်ပျံမှုကိုရရှိခဲ့သည်။
သင်၏အကောင်းဆုံးသော streaming တွဲဖက်ဖြစ်သော Trust မှ HD Studio Signa မိုက်ခရိုဖုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထူးခြားသောလက္ခဏာများပါ ၀ င်သည့် streams များ၊ gameplays နှင့် podcasts များအတွက်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်သည့် HD Studio Signa ။
Deezer မှတစ်ဆင့်အရည်အသွေးမြင့်သီချင်းများကို 3Kbps MP320 နှင့် FLAC အမျိုးအစားများဖြင့်သင်၏ကွန်ပျူတာမှမည်သို့အခမဲ့ download လုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
အလွယ်တကူ Instagram Stories တွေပေါ်မှာမေးခွန်းစတစ်ကာများထည့်သွင်းပုံ
Android ပေါ်ရှိ YouTube incognito mode နှင့်မည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း
အခုဆိုရင် Android အတွက် YouTube မှာသူ့မှာ incognito mode ပါ ၀ င်လာပြီ။ ဒါကြောင့်သူကဘာလဲ၊
Windows 10 မှာ Snipping ကို Keyboard Shortcut တစ်ခုသတ်မှတ်နည်း
Windows 10 ရှိ Snipping အက်ပ်ကိုသင်အလွယ်တကူကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းတစ်ခုကိုမည်သို့လွယ်ကူစွာသတ်မှတ်နိုင်သည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။
privacy ကိစ္စများဘုံထက်ပို။ ဖြစ်လာကြပါပြီ။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒီပြproblemsနာတွေအားလုံးငြီးငွေ့လာပြီ။
စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ယောက်သာ WhatsApp အုပ်စုသို့စာရေးနိုင်သည်
WhatsApp ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာဖြစ်စေရန်ထိုအုပ်စုများကိုစီမံခန့်ခွဲသူမှသာရေးသားနိုင်သည့်ဤအုပ်စုများကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်သည်၊ မည်ကဲ့သို့ပြင်ဆင်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
Spotify Lite ကို သုံး၍ အချက်အလက်များကိုမည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း၊
Spotify Lite သည် Anadroid သို့ရောက်ရှိသည်။ သင့်အချက်အလက်များကို၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်မည်သို့သိမ်းဆည်းနိုင်မည်နှင့်“ lite” ဗားရှင်းတွင်တေးဂီတကိုအများအားဖြင့်မည်သို့သိမ်းဆည်းနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
ဤကိရိယာအသစ်မှတစ်ဆင့် Instagram Story သို့တေးဂီတကိုသင်အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်ပုံကိုသင့်အားပြပါမည်
Glass Curve Elite၊ အကောင်းဆုံးစမတ်ဖန်သားပြင်ကိုသင့်စမတ်နာရီအတွက်ဘယ်လိုထားမည်နည်း
သင့်ရဲ့စမတ်နာရီပေါ်မှာဘယ်လိုဖန်ခွက်တစ်လုံးကိုဘယ်လိုထည့်ရမယ်၊ ဒီ Glass Curve Elite ရဲ့အရည်အသွေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုသင်ပေးပါမယ်။
Instagram ပေါ်ရှိ IGTV အသစ်မှသတိပေးချက်များကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
IGTV Instagram platform သို့ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကို upload ပြုလုပ်တိုင်းသင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်သတိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိရန်သင်ငြီးငွေ့ပါက၎င်းကိုမည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြပါလိမ့်မည်။
Instagram ရုပ်မြင်သံကြားအသစ်ဖြစ်သော IGTV ရုပ်သံလိုင်းကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်နှင့်မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း
Instagram ရုပ်မြင်သံကြားအသစ်ဖြစ်သော IGTV တွင်သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်ပုံနှင့်ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်သည်ကိုသင့်အားပြပါမည်။
Google Chrome တွင် extension များထည့်သွင်းနည်း
မည်သည့် browser အတွက်မဆိုပြည့်စုံသောဖြည့်စွက်မှုနှင့်အတူ extension များ။ စျေးကွက်ရှိလူကြိုက်အများဆုံးဘရောင်ဇာတွင်တိုးချဲ့ရန်ကြိုးစားရန်သင်မဆုံးဖြတ်ရသေးပါက၊ Google Chrome တွင်အသုံးချပရိုဂရမ်များမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အခြားရွေးချယ်စရာများကို PowerPoint ရှာဖွေနေပါသလား။ ဤအရာသည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်တင်ခြင်း (သို့) သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။